म्याट कालो केन्द्र बाथरूम नल
भान्साको नल, भाँडो फिलर, बाथरूम नल | WOWOW
घर / बाथरूमको नल / डबल ह्यान्डल बाथरूम नल / WOWOW मैट कालो बाथरूम नल4इंच केन्द्र
रेटेड 4.935बाहिर आधारित 28 मूल्यांकन ग्राहक
(28 ग्राहक समीक्षा)
wowowfaucet उच्च गुणवत्ता र व्यावहारिक लागत प्रभावी उत्पादनहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ। आधुनिक बाथरूम सिंक नल पेशेवर स्थापना निर्देशनहरूको साथ आउँदछ। स्थापना सरल र स्थापना गर्न सजिलो छ।
2321200B स्थापना निर्देशन
WOWOW बाथरूम नल Centeret कालो 2321200B ध्यानपूर्वक चयनित सामग्री, मोटा सामग्री, सरलता, सटीक निर्माण, पैसाको लागि पूर्ण मूल्य। सबै प्याकेजहरू तीन वर्षको वारेन्टीको साथ, यूपीएस वा यूएसपीएस आर्थिक वा मानक सेवाहरू मार्फत पठाइन्छन्, र द्रुत वितरण सुनिश्चित गर्न १ कार्य दिन भित्र संसाधित हुन्छन्!
२ ह्यान्डल बाथरूम नल: सटीक पानी र तापक्रम नियन्त्रणको लागि क्लासिक २ ह्यान्डल डिजाइन,-इन्च आकार र bas-होल धेरै जसो बेसिनहरू र सिks्कका लागि फिट हुन्छ; लिफ्ट रड ड्रेन असेंबलीबाट सुसज्जित; आपूर्ति लाइनहरू अलग बिक्री गरियो
२ HANDLES FAUCET BATHROOM: गरम र चिसो पानी: ड्रिप फ्री सिरेमिक कार्ट्रिज, निर्मित उच्च सीलिंग सिरेमिक कार्ट्रिज, निर्धक्क पानी र चुहावट बिना दीर्घ-अवधि प्रयोग सुनिश्चित गर्न सजीलो घुमाउँदछ, र पानीको तापमानलाई सही नियन्त्रण गर्दछ।
गुणस्तर र सामग्री: उच्च सील एनएसएफ प्रमाणित कार्ट्रिज ड्रिप मुक्त र सीसा-रहित छ, पानी मानक ग्यारेन्टी गरिएको छ; सामग्री: जस्ता धातु / स्टेनलेस स्टील / धातु
बेस FAUCET उच्च गुणवत्ता: ABS aerator ले %०% पानी र एन्टी-स्प्लेटर बचाउँछ। ड्रिप-फ्री सिरेमिक कार्ट्रिज सहन हुन्छ। तामाको खुट्टा, स्टेनलेस स्टीलको बाहिरी कवच, टिकाउ संग उच्च गुणवत्ताको नल।
Y बर्षे वारंटीको साथ भान्टी फेक: कृपया कुनै पनि प्रश्न भए कृपया हामीसँग सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। हामी सकेसम्म चाँडो तपाईंको समस्या समाधान गर्नेछौं।
SKU: 2321200B विभाग: बाथरूमको नल, डबल ह्यान्डल बाथरूम नल टैग: २ ह्यान्डल,3प्वालहरू, काले
ब्रश गरिएको कांस्य / कालो
मलाई यी नलहरू मन पर्छ! तिनीहरू लोभ र होम डिपो भन्दा सस्तो थिए र उनीहरू धेरै राम्रा देखिन्थे। पानीको चाप पनि राम्रो छ।
B *** ई2020-03-02
धेरै राम्रो कडा faucets। हामीसँग एक बर्ष को लागी एक छ। हामी अब निर्माण गर्दैछौं र हाम्रो घरको लागि दुईवटा किनेका छौं।
अझै स्थापना पछि एक बर्ष काम गर्दै। दैनिक प्रयोग, चुहावटको कुनै संकेत बिना।
म *** घ2020-03-09
साँच्चिकै राम्रो र राम्रो गुणको वस्तु। EI यो स्टोरको मेरो बाथरूममा धेरै राम्रो देखिन्छ म फेरि मेरो अर्को घरको लागि किन्नेछ यो सबै चीज आउँछ पुरानोसँग भएको सि s्कबाट पानी रोक्न बटन थिच्नुहोस्।
asy स्थापना गर्न।
जे *** ई2020-03-12
यस नललाई मनपर्दछ र सब भन्दा राम्रो अंश पप अप ड्रेन हो, यसका लागि सजिलो हुन्छ यस नल मेरो बाथरूममा राम्रो देखिन्छ र यसले महान काम गर्दछ।स्टल र केवल एक सुन्दर सुविधा।
राम्रो गुणस्तरको सामग्री र मूल्य उचित छ, म यो उत्पाद बाथरूम नलको सिफारिस गर्दछु
केवल उत्तम छ। ठूलो मूल्य, गृह डिपोमा पागल पैसा खर्च गर्न आवश्यक पर्दैन। यो धेरै सुरुचिपूर्ण, आधुनिक र प्रयोग गर्न सजिलो छ। मलाई यो मनपर्दछ, मेरो बाथरूम फेन्सी देखिन्छ।
मलाई मन पर्छ कति उच्च र सि the्कको बीचमा यो बस्दछ। समाप्त / रंग राम्रो छ। ह्यान्डल को उपयोग को को लागी सहज र सजिलो छ। म मेरो अर्को बाथरूमको लागि अर्को किन्नेछु।
यस उत्पादनसँग धेरै सन्तुष्ट यो स्थापना गर्न सजिलो छ, एक महान आधुनिक रूप छ र कम से कम हालको लागि उत्तम तरीकाले काम गर्दछ। यो मूल्य को लागी महान उत्पादन।
एम *** एल2020-03-26
नलको गुणवत्ता र स्थापनाको सजिलोको साथ सुखद आश्चर्यचकित। सबै पुरानोलाई बदल्नमा पूर्ण रूपमा फिट हुन्छन्, विशेष गरी जब प्लम्बिंग हाम्रो मनपर्ने काम छैन। सामान्यतया हामी केहि भाग प्राप्त गर्न अतिरिक्त यात्रा गर्नु पर्छ। यो सजिलैसँग गयो।
अहिले सम्म एक उत्तम faucets पैसा किन्न सक्छ। मैले डिपार्टमेन्ट स्टोरले चाहेको आधा चीजको लागि यसलाई पाए र यो महसुस भयो र तिनीहरूको लागी राम्रो देखिन्थ्यो। पक्कै फेरि किन्नेछ
आर *** y2020-04-05
धेरै राम्रो खोज र कडा उत्पादन। प्लग ठूलो छ र सम्पूर्ण ड्रेन होलमा कभर गर्दछ (केवल नाली भित्र जान सक्दैन)।
ई *** ई2020-04-10
हामी वास्तवमै मन पराउछौं कि यो स्थापना भएपछि कसरी बाहिर जान्छ। उत्पादन राम्रो गुणवत्ता र राम्रो प्याक गरिएको छ। यो मूल रूपमा २ अलग टुक्राको साथ आउँदछ: ह्यान्डलको साथ नल, र नाली अंश। निर्देशनहरू बिना स्थापना गर्न कहाँ जान्छ बुझ्नको लागि सरल।
यो प्लास्टिकको सट्टा धातुले बनेको छ, र धेरै टिकाऊ, स्टाइलिश र कार्यात्मक हो। म यस उत्पादनको सिफारिश गर्दछु यदि तपाईलाई RV बाथरूम lavtory नल को लागी एक प्रतिस्थापन को आवश्यकता छ। कुनै प्रश्न बिना किचनको सिink्क नल बदल्ने समय आउँदा म फेरि यो ब्रान्ड छान्नेछु।
V *** ई2020-04-19
यो गुणको लागि यत्ति कडा छ। स्थापना गर्न सजिलो र सरल। किन म ती मध्ये दुई मेरो डूब प्रतिस्थापन गर्न। तपाईं वास्तवमै the 35 भन्दा कम मूल्य सोच्नुहुन्न। वाह, यो गुणवत्ता संग यति मूल्य छ कि local 50 भन्दा बढी भन्दा राम्रो छ कि मैले स्थानीय स्टोरबाट किनेको (होम डिपो, लोवेस ...)
नयाँ भ्यानिटीमा स्थापना गर्न सजिलो। पानीको प्रवाह महान छ! यसले स्थापना गर्न करीव १० मिनेट लियो! यो हाम्रो अतिथि बाथरूममा राम्रो काम गर्दछ। हामी यस सुविधालाई मन पराउछौं जुन हामीलाई एकै समयमा गर्मी र चिसो नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ। यो सबै भागहरूको साथ आयो र निर्देशनहरू एकदम सरल थियो
यो राम्रोसँग बनेको राम्रो नल हो। यो एक उच्च सामान्य ब्रान्ड नाम नल जस्तो देखिन्छ, तर राम्रो मूल्य तल र उचित संख्यामा। राम्रो सिरेमिक कार्ट्रिजको साथ आउँदछ जुन भ्वाल्भलाई खुला वा बन्द एक डाइममा कुनै लीक बिना। त्यहाँ एरेरेटरमा निर्मित छ जसले पानीको सही मात्रामा स्प्लिटर वा डराउने आवाज बिना नै वितरण गर्दछ। ब्रश निकल फिनिश मेरो सिink्कसँग साँच्चिकै राम्रो हुन्छ।
यसलाई मेरो नयाँ भ्यानिटमा स्थापना गर्न १ 15 मिनेट मात्र भयो। मलाई पप अप ड्रेन मन पर्छ, जुन पुल अप नाली भन्दा स्थापना गर्न सजिलो छ। मैले ल्याएको नल उच्च गुणस्तरको पीतलबाट बनेको छ। यो धेरै राम्रो गरी बनाइएको र ठोस टुक्रा हो, निश्चित रूपमा लामो समयको लागि रहनेछ। र मूल्य पनि ठूलो छ। म अन्य अन्य बाथरूम प्रतिस्थापन गर्न दुई थप खरीद गर्नेछु।
एच *** ई2020-04-28
यो धेरै आकर्षक छ, सँगै राख्न को लागी सजिलो छ र चुहाउँदैन। सावधानीको एकमात्र शब्द यो हो कि पानी निकै दबाबको साथ बाहिर आउँछ। प्रशस्त पानी प्राप्त गर्न तपाईलाई नबल्स मात्र पाउनु पर्छ।
यो मेरो मास्टर बाथरूमको लागि हो, मेरो मूल धेरै नै लीक हुँदैछ, त्यसैले मैले राम्रो देखिने गरी नयाँ प्राप्त गर्ने निर्णय गरें। त्यसैले म मेरो बाथरूमको लागि नयाँ शैली प्राप्त गर्नेछु। यो स्थापना गर्न एकदम सजिलो छ, राम्रो गुण हो, र म विश्वास गर्दछु लोभ वा होम डिपोमा समान मूल्य उत्पादनहरू भन्दा यो राम्रो हो। मैले ती दुबै स्टोरहरू जाँच गरें, र त्यहाँ नलहरू धेरै महँगो हुन्छन्, ती मध्ये प्रायः about० डलर। ती दुई स्टोरहरूमा मूल्य निर्धारण सीमामा WOWOW सँग समान गुण छ।
मलाई वास्तवमै यो नल मनपर्छ। यो स्थापना गर्न सजिलो थियो। यो मेरो बाथरूममा क्याबिनेटहरू यति राम्रोसँग मेल खान्छ। धेरै खुसी मैले यो किनेको। यो धेरै सस्तो छ। मलाई ठ्याक्कै पक्का छैन कि यो कति लामो समय सम्म रहनेछ तर यस्तो देखिन्छ कि यसले धेरै बर्षसम्म टिकाउ हुन सक्ने सम्भाव्यता छ।
धेरै राम्रो सजिलो स्थापना। राम्रो गुणवत्ता। मात्र मलाई १० मिनेट लिनुहोस् यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि। पानी छिटो र बलियो बाहिर आउँछ। यति लायक it.10stars
एच *** ई2020-05-25
यो राम्रो सम्झौता हो। नल मेरो बेसमेंट बाथरूमको लागि हो। मसँग आज स्थापना गर्ने समय छ। मलाई नलको बारेमा डिजाइन मनपर्छ र यो स्थापना गर्न सजिलो छ। अलि अलि निराश हुनु यो थोरै भारी हो। यो यसको अर्थ उच्च गुण हो।
धेरै प्रभावशाली मूल्य - राम्रो गुणस्तर, स्थापना को सरलता, शैली। म यो खरीद संग धेरै खुसी थिए। उत्कृष्ट र उच्च गुणवत्ताको नल।
प्रोफेशनल प्याकेजि.। मँ धेरै प्रसन्न छु, चारै तिर, खरीदबाट स्थापनाको लागि यस उत्पादनको साथ। धन्यबाद। यो सुपर मूल्य हो र स्थापना गर्न धेरै सजिलो छ। सबै तंग र ठोस।
एच *** एच2020-06-21
बाथरूम भ्यानिटी प्रतिस्थापन को लागी काम गरीएको छिटो जहाजमा फेरि किन्ने थियो
राम्रो चीज धेरै सजिलो स्थापना। वसन्त लोड ड्रेन प्लग पुश डाउनलाई प्रेम गर्नुहोस्। धेरै पातलो।
सरल स्थापना, चाँडै नै सेट अप गरेन, एक समान पानी उत्पादन, यो प्रयोग गर्न सुविधाजनक छ र उपस्थिति डिजाइन धेरै नाजुक छ, नल एकदम सुन्दर प्रभाव धेरै राम्रो छ, पानी धेरै स्पष्ट छ, धेरै दिनको बच्चा, वास्तवमा पनि। राम्रो, फ्लश सबै पक्षहरू धेरै सुविधाजनक, र सबै भन्दा नयाँ सामग्री हो
यो नल मेरो बाथरूमको लागि उत्कृष्ट छ। यससँग ह्यान्डलहरू छन् र हेर्न यो सजिलो छ कि यो चिसो वा तातो छ कि छैन। यो प्रयोग गर्न पनि सजिलो छ र मेरो सम्पूर्ण परिवारलाई यो मनपर्दछ।